Iindaba -Impahla yokuPakisha yeNtengiso elawulwa yi-Innovation
ikomityi yekofu yephepha
imveliso ezinokuboliswa ziintsholongwane
Imveliso yesitashi sengqolowa
Imveliso yephepha lePLA
Izixhobo zokuPakisha kwiMarike elawulwa yi-Innovation
Kwilizwe lezixhobo zokupakisha kunye neemveliso, ubuchule kunye nenkqubela phambili zihlala zikhokelela kubude obutsha bokuyila. Ezinye zeendlela zamva nje sele zithathe imarike ngesaqhwithi kwaye ziyatshintsha indlela iinkampani ezijonga ngayo izinto zokupakisha kunye neenkqubo zokuhambisa.
Kufuneka iqatshelwe ukuba enye yezona zinto zihamba phambili zivela kutshintsho olukhawulezayo lwezinto ezinokuthi zongezwe kwiimveliso. Sonke siyazi ukuba iimfuno zabathengi kunye neengcinga ezintle zinokuthi gqi kwiintloko zethu zibonakala ngathi azikho ndawo, nto leyo ethetha ukuba amashishini kufuneka asebenze engayeki ukuphucula ukupakishwa kwawo kunye neempawu ezinokuthi zibonelele. Omnye umzekelo uvela kuRobert Hogan, umlawuli wophuhliso lweshishini lweZip-Pak. Kutshanje uHogan uthe ezinye iinkampani zisebenzise abaguquli bobuchwephesha koomatshini abakhoyo abavumela ukuba izinto ezintsha zongezwe kwiiveki nje ezintandathu. Oku kuyenza ukuba inkqubo yokuvelisa xa iyonke ibe namava ophazamiso oluncinci kwaye kufuneka utyalo-mali olongezelelekileyo lweemali ezinkulu.
Ngaphezulu koku, enye into eyaziwayo kakhulu kwintengiso yokubonelela ilula. Abathengi banamhlanje bafuna ukubakho lula kuwo onke amanqanaba enkqubo yabo yokuthenga. Xa iinkampani zikwazi ukubonelela abathengi bazo ngoku, zikhawuleza kwaye ziphucule isibheno sophawu lwazo kunye neemveliso zazo. Ngokwenza njalo, oku kufuna ukuba amashishini kunye nabavelisi batyale imali ngakumbi kwinkqubo yabo yokukhetha iphakheji, ngaphandle kwendleko. Sibona umzekelo ogqwesileyo kwiphakheji yeMbewu kajongilanga enkulu, apho ukutya kuhlala kukhuselekile ngaphakathi kwebhegi yayo ngenxa yento yokutshixa zip phezulu. Oku akuncedi nje ekuphuculeni ukusebenziseka lula kwabathengi kunye nokusetyenziswa ngokulula, kodwa kukwaphucula ubomi beshelfri yemveliso ngaxeshanye.
Ingxelo yakutshanje yoPhando kunye neeMarike ifumanise ukuba elinye icandelo eliphambili kushishino lokupakisha kutshintsho olupakishwayo olunokuboliswa ziintsholongwane. Olu hlobo lonikezelo sele lubonile ukukhula kwaye luya kuqhubeka nokukhula ekuthandeni, kunye nentsingiselo ngokubanzi yokuziqhelanisa nokuzinzileyo kunye nokupakisha okuqhubekekayo. Ngenxa yoko, sinokubona nje ukuba ukupakishwa kwezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane kuye kwaba ngumdlali obalulekileyo kwaye ophambili kwindawo yentengiso yokubonelela.
Njengokuba kunjalo, abavelisi abaninzi bazama ngenkuthalo ukwahlula iimveliso zabo kubakhuphiswano ngokubonelela ngophuculo kwimigangatho esekwe kushishino. Njengokuba ezi nkampani ziqhubeka zisebenzisa ukupakisha njengesixhobo sokukhusela nokukhuthaza ukhuseleko kwindalo esingqongileyo, imfuno yendalo kunye nokukhula okunokubakho kuya kuphakama ngakumbi. Oku kuthetha ukuba xa kuziwa ekuhlangabezaneni neminqweno yabathengi, iindlela zokubopha ezinokuboliswa ziintsholongwane kunye ne-eco-friendly yindlela elandelayo yokunyuka.
Lwedilesi: No. 5051, Shengli East Str, District Kuiwen, Weifang City, Shandong Pro, China
Izixhobo zokuPakisha zeMarike ezilawulwa yi-In ...
Inkunkuma ayifuni, ayifuni: Yimalini ukupakisha kw ...